Indroa nametra-pialana ny PM - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Indroa mihantoana no nametra-pialana ny PM Olivier Mahafaly Solonandrasana. Ny voalohany dia teny Mahazoarivo ny marain'ny alatsinainy 4 jona 2016 nanoloana an'ireo mpampita vaovao. ary ny faharoa dia teny Iavoloha ny mitatao vovonana ary niaraka tamin'ny mpikaùmbana iray manontolo ao amin'ny Goverinemanta.
Tonga izao ny fotoana izay tsy maintsy hanapahako hevitra amin’ny maha-Olompirenena tomponandraikitra ahy (“citoyen responsable”).
Tonga ity ny fotoana izay tsy maintsy hampanambarako ampahibemaso, hanaporofoiko fa Olom-panjakana aho (“homme d’état”).
Izao no fotoana mety izay hanaporofoiko eo imason’ny Malagasy rehetra manerana an’i Madagasikara sy eo imason’izao tontolo izao fa mitazona ny teny izay nomeko aho (“homme de parole”).
Tsara angamba no hanaovana jeritodika kely ny tantara nahatongavantsika amin’izao sehatra izao.
Nisy ny fanapahankevitra izay noraisin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana taorian’ny fitoriana nataon’ireo Solombavambahoaka miisa 73 avy ao amin’ny fanoherana izay nangataka, nitaky ny fanalàna amin’ny toerana ny Filohampirenena ankehitriny. Ny fanapahankevitra izay noraisin’ny Filankevitry ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana moa taorian’izay dia hoe : “Tsy maintsy ravàna ny Governemanta ary hapetraka amin’ny fotoana voafetra ny Governemanta izay atao hoe Governemantan’ny marimaritra iraisana”.
Ekeko tsy misy adivarotra izay fanapahankevitry ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana izay. Ary tsy te-ho vato misakana rahateo ny tenako amin’ny famahàna ny olana ankehitriny fa mijoro hatrany mitondra vahaolana, mitondra anjarabirikiko eo amin’ny famahàna ny olana eto amin’ny Firenena.
Tsy an-tery, na amin’ny alahelo, fa an-tsitrapo, androany, ary an-kafaliana tokoa no ametrahako ny fialàna androany ary hanolorako eo anatrehan’ny Filohampirenena rehefa avy eo izay fametrahan-taratasy fametraham-pialàna izany.
Eto dia araraotiko ny fotoana ohatr’izao satria tsy maintsy ataoko izay fametraham-pialàna izay mba hahafahan’ny Filohampirenena misafidy malalaka izay Praiministra hitantana ny Governemantan’ny marimaritra iraisana.
Eto araraotiko ny milaza aminareo eto ny fisaorana mitafotafo izay hatolotro ny Filohampirenena izay nametraka fitokisana tamiko mandritra ny roa taona sy iray volana mahery tamin’ny fitantanana ny Governemanta.
Mandritra ny fotoana izay naha-teto amin’ity Lapam-panjakana Mahazoarivo ahy, nitory hatrany ny Firaisankina ho an’ny Vahoaka Malagasy ny tenako ary nanambara hatrany ny maha-zavadehibe ny tokony hidirana amin’izany hoe Firaisankina, na ny hoe Fihavanampirenena na Fampihavanampirenena izany.
Niezaka ny tenako nanatona an’ireto tsy nitovy firehankevitra tamiko. Ary niezaka ny tenako niara-niasa tamin’izy ireo ary voaporofo izany tamin’ny fiaraha-miasa tamin’ireo Solombavambahoaka teo anivon’ny Antenimierampirenena.
Niezaka ihany koa ny tenako nitady marimaritra iraisana hatrany, indrindra tamin’ny fandrafetana ny Lalàna, ny Lalàna mampiasa ny Fifidianana, eny fa na dia tsy tomponteny farany aza aho.
Ny azoko hambara dia izao :
Tsy nisy nanenenako ny vita. Ary isaorako Andriamanitra Andriananahary nanomezana fotoana, fahendrena, tsilotsaina ny tenako nahafahako nanatanteraka ny Adidy Masina teo amin’ny Tanindrazana.
Ary eto, mamelà ahy ianareo raha hisaotra amin’ny fomba manokana ireo Ministra rehetra izay "Membres"-n’ny Gouvernement izay niara-dàlana tamiko hatrany, izay nanao ny fomba rehetra ahafahana nampandroso an'i Madagasikara, na dia mbola tsy tratra aza ny tanjona eo amin'ny ady amin'ny fahantràna.
Misaotra ihany koa ireo Olomboafidy isan-tsokajiny manerana an'i Madagasikara tamin'ny fanomezan'ny zareo tolo-tànana ny tenako nahavitàna nanao iny dingana anankiray iny teto amin'ny Firenena.
Isaorako ihany koa ireo Solontenam-panjakana rehetra izay namana, Mpiara-miasa akaiky.
Ao ihany koa ireo "Chefs de Région" na Lehiben'ny Faritra, teo amin'ny fahaizan-dry zareo niara-niasa tamiko sy tamin'ny Governemanta, nametrahana hatrany ny fitoniana teo anivon'ny Faritra rehetra rehetra, sy ny fampandrosoana ihany koa mba hipàka hatrany amin'ifotony.
Misaotra indrindra indrindra ihany koa ny Mpiasam-panjakana ny tenako. Ao anatin'izany ireo "syndicats" maro isan-karazany izay nanandratra avo izany hoe Fanevan'ny Firenena izany, nametraka ho lohalaharana foana ny tombontsoa ambonin'ny Firenena na dia teo aza izay fitakiana maro isan-karazany, tsy nampitsanga-menatra fa nihodina hatrany ny milina nampandeha ny raharaham-panjakana.
Ary farany, nefa manan-danja indrindra, dia tiako ny misaotra eto ny Vahoaka Malagasy rehetra tsy vakivolo. Ny Vahoaka Malagasy izay nimatimatesako hatrany teo amin'ny adidy aman'andraikitra izay niantsorohako. Ary tsaroako amin'ny fomba manokana eto ireo izay tena fadiranovana, izay mbola ao anatin'ny fahantràna amin'izao fotoana izao. Raha mbola omen'Andriamanitra herin-tsaina, herim-batsana, fahendrena, ny tenako, n'aiza n'aiza ny toerana hisy ahy, dia tsy maintsy hahatsiaro ary hanampy an'ireny Olona ireny.
Ary eto am-pamaranana, manao mandrapihaona aminareo vetivety ny tenako.